बिरामी दाजुलाई किड्नी दिन भाइले गरे दे,ह,त्याग, कोठा खोलेर हेर्दा भेटियो यस्तो ‘नोट’ लेखेको थियो यस्तो भावुककुरा – Khabar 27 Media
बिरामी दाजुलाई किड्नी दिन भाइले गरे दे,ह,त्याग, कोठा खोलेर हेर्दा भेटियो यस्तो ‘नोट’ लेखेको थियो यस्तो भावुककुरा
February 1, 2021 July 28, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on बिरामी दाजुलाई किड्नी दिन भाइले गरे दे,ह,त्याग, कोठा खोलेर हेर्दा भेटियो यस्तो ‘नोट’ लेखेको थियो यस्तो भावुककुरा
भारतको गुजरात राज्यस्थित एक विद्यार्थीले दाजुको ज्यान बचाउनका लागि आफ्नो ज्यान नै दिएका छन् । १९ वर्षीय नैतिक तन्देल आफना बिरामी दाजुलाई किड्नी दान गर्न चाहन्थे ।यसका लागि शनिवार उनले अस्पतालको कोठामा झु न्डि एर आ त्मह त्या गरे । तर उनको यो बलिदान चिकित्सकहरुका कारण काम लाग्न सकेन ।
चिकित्सकहरुले दाजुको शरिरमा प्रत्यारोपण गर्न नमान्दा उनको मृगौला खेर गएको छ । जानकारी अनुसार पुलिसले नैतिक झु न्डि एको कोठाबाट सु साइ ड नो ट पनि बरामद गरेको छ ।
यसमा मृ तक नैतिकले दाजु कनिषलाई मृगौला दान गर्ने इच्छा जनाएका थिए । नैतिकले नोटमा लेखेका थिए ‘दाजुलाई किड्नी दान गर्न चाहन्छु । यसैले आफ्नै खुसीले ज्या न दिँदैछु । यसमा कसैको हात छैन र मेरो आ त्मह त्याबारे कसैलाई नसोध्नुहोला ।’
उनले नोटमा अगाडि लेखेका छन्, ‘किड्नी दाजुलाई प्रत्यारोपण गरिदिनुहोला । बाकी शरिर कुनै आवश्यक परेको स्थानमा दिनुहोस ।’ नैतिक गुजारतको वलसाडस्थित पारदीका बासिन्दा थिए ।
उनी गुजरातकै वरनामामा बाबरिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा सेकेन्ड इयरका विद्यार्थी थिए। २५ जुनबाट तेस्रो वर्षको पढाई थाल्ने तयारीमा थिए । नैतिकका पिता अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । आमा भने गृहिणी हुन् । परिवारका साँझ फोनमा नैतिकसँग कुरा भएको थियो । फोनमा कुरा हुँदा उनले कुनै प्रकारको तनाव प्रकट गरेका थिएनन् ।
जानकारी अनुसार नैतिकका दाजु पछिल्लो कयौँ दिनदेखि बिरामी थिए । उनका दुवै मृगौला फेल भएका थिए । त्यहीकारण उनी डाइलिसिस गरिरहेका थिए । समाचार अनुसार नैतिकले दाजुको यो पीडा देख्न सकेका थिएनन् । उनले दाजुलाई किड्नी दान गर्ने योजना बनाएका थिए ।
त्यसैले उनले अस्पतालको कोठा बन्द गरेर आ त्मह त्या गरे । नैतिकको इच्छा अनुसार परिवारजनलले जिल्लाको एसएसजी अस्पताललका डाक्टरसँग किड्नी ट्रान्सप्लान्टका लागि सहयोग मागे । तर जब श वलाई अस्पताल लगियो तब डाक्टरले ट्रान्सप्लान्ट गर्न इन्कार गरिदिए ।
यस्तो छ बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्याको सुन्दरताको राज ! साथमा सुन्दर फोटो फिचर पनि…
यस्तो महंगीमा काठमाण्डौंमा ६५ रुपैयाभा टन्न खाना, खानेहरूको यस्तो भिड भिडियो सहित)
भा’गी विवाह गरेकाे २० दिनपछि युवती छाडेर युवक फ’रा’र, युवती गोठमा ब’न्ध’क !
June 8, 2021 Shyam Lama
मरेर बाँचे आफन्तलेनी माया मरेका थिए, मेरो अन्तिम अवस्था आयो भन्ने सो’च्न थाले छा’ती’को दु’खा’ई स’ह’न नसकेर उनले मु’ड्की’ले ‘छा’ती’मा बजारे जीवनसँग पौँ’ठे’जो’री खेले ,कोरोनालाई नजरअन्दाज नगरौं
May 19, 2021 May 19, 2021 Shyam Lama
छोरीहरूले गरे बुबाको दा’हसंस्कार, छिमेकीले मानेनन् छुन
June 9, 2021 Shyam Lama